တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: August 2012
တွေးမိတွေးရာ ၆ နှစ်တာ ...
၂၀၀၆ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၃၀ ရက်မှာ စတင်ခဲ့တဲ့ ကျမရဲ့ ဘလော့လေးဟာ ဒီကနေ့ဆိုရင် ခြောက်နှစ်တိတိ ပြည့်ခဲ့ပါပြီ။ ကျန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပတ်လည်နေ့တွေကို ပြန်ကြည့်တော့ …. တနှစ်ပြည့်တဲ့နေ့ ၂၀၀၇ သြဂုတ် ၃၀ မှာပဲ မြန်မာပြည်မှာ ရှိနေခဲ့ပြီး ၂ နှစ်ပြည့်ကစလို့ ၅ နှစ်ပြည့်တဲ့ နေ့ထိ ကျမပြည်ပမှာ ရောက်ရှိနေခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီနှစ် ခြောက်နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့မှာတော့ မြန်မာပြည်မှာ ရှိနေခွင့်ရတာမို့ ကိုယ့်ဘာသာ ကျေနပ်နေမိတယ်။
ဒီထက်ပိုပြီး ကျေနပ်စရာကောင်းတာက … မြန်မာပြည် ရောက်တုန်းရောက်ခိုက် ကိုယ်ချစ်ခင် လေးစားတဲ့ ဘလော့ရေးဖော် ရေးဘက်တချို့နဲ့ ဆုံဆည်းခွင့်ရတာကိုပါပဲ။ ဟိုအရင် ဘလော့ရေးခါစက ဘလော့စာအုပ်ထုတ်ဖို့အတွက် ဘလော့ဂါတချို့နဲ့ ဆုံခဲ့ဖူးတယ်။ ၂၀၀၇ အောက်တိုဘာမှာ ဘိလပ်ကို ရောက်သွားပြီးနောက်ပိုင်း ဘယ်ဘလော့ဂါနဲ့မှ မဆုံဖြစ်တော့ဘဲ ၂၀၁၀ လောက်မှ တုံးဖလား သူကြီးနဲ့ ကိုမင်းထက် (အလင်းတန်း) တို့ကို တွေ့ဖူးခဲ့တယ်။ တဦးနဲ့တဦး အင်တာနက် စာမျက်နှာထက်မှာ ကျွမ်းဝင်ခဲ့သူတွေ အပြင်မှာတွေ့ရတော့လဲ မိတ်ဆွေဟောင်းတွေလိုပဲ ရင်းနှီးခင်မင်ကြတယ်။
ဒီလိုနဲ့ မြန်မာပြည် ပြန်ရောက်တော့ ကျမထက် အရင် ပြန်သွားတဲ့ ကိုညီလင်းသစ်၊ ဦးဟယ်ရီလွင်၊ ဘုန်းဘုန်းတောက်ပကြယ်စင်တို့နဲ့ ဖုန်းအဆက်အသွယ်ရခဲ့တယ်။ ကျမရေးတဲ့ ပို့စ်တိုင်းလိုလို သေချာဖတ်ပြီး မှတ်ချက်လှလှလေးတွေ ရေးပေးတတ်တဲ့ ကိုညီလင်းကို တွေ့ဖူးချင်တယ်၊ ပြီးတော့ … သူ့စာထဲက ဇာတ်လိုက်တွေဖြစ်တဲ့ မအိမ်သူလို့ အမြဲသုံးလေ့ရှိတဲ့ ဇနီးချောရယ် ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ သားသားလေးတို့ကိုလဲ တွေ့ဖူးချင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုညီလင်းအားတဲ့ရက်က ကျမ အမကြီး ဆေးသွင်းရမယ့် နေ့နဲ့ တိုက်ဆိုင်နေတာမို့ မဆုံဖြစ်ခဲ့ကြဘူး။
မြန်မာကဗျာကို ချစ်မြတ်နိုးပြီး ကျမကဗျာတွေမှားရင် ထောက်ပြပေး ပြင်ပေးတတ်တဲ့ ခရမ်းပြာကြယ်စင် မင်းသားကြီး ဦးဟယ်ရီကတော့ လာမယ်ပြောပြီး တော်တော်နဲ့ ရောက်မလာဘဲ ညနေအတော်စောင်းမှ ကမန်းကတန်း ၀င်လာလို့ လမ်းမထက်မှာပဲ ခဏစကားပြောဖြစ်ကြတယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ ဦးဟယ်ရီ လာတဲ့အချိန် အိမ်ရှေ့လမ်းမထက်မှာ မီးသတ်ကားတွေ ဥသြဆွဲပြီး ဖြတ်သွားကြတာ ဆူညံနေလို့ စကားတောင် မနည်းပြောကြရတယ်။ ကိုယ့်ဆီ တကူးတက လာတွေ့တဲ့ ဦးဟယ်ရီကို မိုးတိုးမတ်တပ် ဧည့်ခံရတာ အားနာစရာ … ။
ရိုးသား ပွင့်လင်း ဖော်ရွေသဘောကောင်းတဲ့ ဘုန်းဘုန်းတောက်ကတော့ ကျမ မြန်မာပြည် ပြန်မရောက်ခင်ကတည်းက ကျမအိမ်ကို ရောက်ဖူးပြီးသားပါ။ ဘုန်းတောက်အတွက် ကျမထိုးထားတဲ့ သိုးမွှေး ဦးထုပ်လေးကို လူကြုံနဲ့ ပို့တုန်းက လာယူရင်း အိမ်ကို ရောက်ဖူးတယ်။ အခု ကျမရောက်နေတာ သိတော့ ဖုန်းဆက်ပြီး အိမ်ကိုလာမယ့် အချိန်ကို ပြောပါတယ်။ ဘုန်းကြီးဆိုတော့ အချိန်တိကျတဲ့အပြင် ပြောထားချိန်ထက်တောင် စောပြီး ကြွချီတော်မူလာတယ်။ လက်ထဲမှာလဲ ကျွတ်ကျွတ်အိတ် အကြီးစားနဲ့ ထည့်ထားတဲ့ လက်ဘက်ခြောက်ထုတ်ကြီးဆွဲလို့၊ မေဓာ့အတွက် တဲ့ … ။ ကျမ တယောက်ထဲသောက်ရင် တနှစ်လောက် သောက်ယူရမလား မသိဘူး။ ကျမက ရေနွေးကြမ်း ကြိုက်တာမို့ ဘုန်းတောက်ကို ကျေးဇူးတွေ တင်မိတယ်။ လက်ဘက်ခြောက်လေးက လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်နဲ့ မွှေးနေတာပဲ။ ကျေးဇူးပါ ဘုန်းတောက် … ။
တခါတော့ ရွှေမန်းက အမရွှေစင်ရဲ့ ညီမတော် အရီးလေးစစ နဲ့ ဂျီတော့ခ်ကြရင်း အရီးလေးက အန်တီတင့် မန်းကို ရောက်နေကြောင်း ပြောတယ်။ ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းပြီး သွားခဲ့တဲ့ ခရီးစဉ်တွေ ဘုရားသမိုင်းတွေ မှတ်တမ်းတင်လေ့ရှိတဲ့ ခင်မင်လေးစားစရာ ကောင်းတဲ့ တီတင့်ကို နှုတ်ဆက်ချင်တာမို့ တီတင့် ဖုန်းနံပါတ် အရီးလေးဆီက တောင်းပြီး တရက်မှာ ဖုန်းဆက်စကားပြော ဖြစ်ကြတယ်။ မကြာခင် ရက်ပိုင်းအတွင်း တီတင့်က မုန့်ပုံးရယ် အိုဗာတင်းတဗူးရယ်နဲ့ အိမ်ကို ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ အားနာဖို့ ကောင်းလိုက်တာ … လာသမျှ ဧည့်သည်တွေကို ကျမ ဧည့်ဝတ်မကျေနိုင်ဘူး။ တီတင့်က ဇူလိုင် (၁၉) ရက်နေ့ သူ့အိမ်မှာ ဘလော့ဂါတွေ ဆုံကြမယ်တဲ့ … ကျမကို ဖိတ်တယ်။ အမရွှေစင်နဲ့ အရီးလေးလဲ ပါမယ်ဆိုလို့ ကျမက သိပ်သွားချင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီနေ့က ကျမအိမ်မှာလဲ ဘုန်းကြီးဆွမ်းကျွေးတာနဲ့ တိုက်ဆိုင်သွားလို့ တီတင့်အိမ်ကို သွားချင်ပါလျက် မသွားခဲ့ရဘူး။ ဆောရီးပါ တီတင့် … ။
အဲဒီနေ့က ဘလော့ဂါအတော်များများ တီတင့်အိမ်မှာ ဆုံကြသတဲ့။ ကမ္ဘောဒီယားက ခဏလာလည်တဲ့ ( ၀ါခေါင်မိုး ဘလော့ ) ရေးသူ မအိမ်သူလဲ လာတယ်ပြောတယ်။ နောက်ရက်မှာ မအိမ်သူ လက်ဆောင်ပေးတဲ့ ကီးချိန်းလေးကို တီတင့် ယာဉ်မောင်းကြီးနဲ့ ပို့ခိုင်းလိုက်လို့ ပိုအားနာရသေးတယ်။ ကျေးဇူးပါ တီတင့် ... ။ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် မအိမ်သူ ... ကျေးဇူးစကား ခုမှ ပြောဖြစ်တာလဲ ခွင့်လွှတ်ကြပါ။
များမကြာမီပဲ အမရွှေစင်က အရီးလေးစစကို ခေါ်မလာဘဲ ချစ်ချစ်ကြီးနဲ့အတူ ရန်ကုန်ကို နောက်တခေါက် ထပ်ရောက်လာပါတယ်။ ဒီတခါတော့ တွေ့ဖြစ်ကြပြီပေါ့ … ထုံးစံအတိုင်းပဲ အမရွှေစင်က ကျမဆီလာခဲ့ရတာပါ … ။ ချစ်ချစ်ကြီးကို လက်ဘက်ရည်ဆိုင်မှာ ထားခဲ့ပြီး ကျမအိမ်ကို တယောက်ထဲ ရောက်လာတဲ့ အမရွှေစင်နဲ့ ကျမ စကားလက်ဆုံ ပြောမကုန်ပေါ့ … ။ မပြန်ခင် တရက် (ကျမ မွေးနေ့မှာ) လဲ အမရွှေစင် ထပ်ရောက်လာပါသေးတယ်။ လက်ထဲမှာလဲ မုန့်ထုပ်တွေနဲ့။ အားနာနာနဲ့ ယူထားလိုက်ရသေးတယ်။ :) အဲဒီနေ့က ညစာအတူစားဖို့ အမရွှေစင်တို့ ဇနီးမောင်နှံကို ဖိတ်ခဲ့ပေမဲ့ မအားလို့ မလာဖြစ်ကြဘူး။ စိတ်မကောင်းပါဘူး အမရွှေစင် … ။
ဒီလိုနဲ့ မအားလပ်တဲ့ကြားထဲက ဘလော့ရေးဖော်တွေနဲ့ အသံချင်းဆုံရ လူချင်းဆုံရတာ ကျေနပ်နေရင်း တညခင်းမှာ ထူးဆန်းတဲ့ ဖုန်းတကောလ် ၀င်လာပါတယ်။ “မေဓာနဲ့ ပြောချင်လို့ပါ” ကြည်သာချိုမြတဲ့ အမျိုးသမီး တဦးရဲ့ အသံကို ကြားလိုက်ရတယ်။ “ဟုတ်ကဲ့ ပြောနေပါတယ် … ခုပြောတာ ဘယ်သူပါလဲ” ဆိုတော့ … “အမကလေ ဘယ်သူ့ကိုမှ တခါမှ အခုလို မိတ်မဆက်ဖူးပါဘူး၊ မေဓာ့ဘလော့က စာတွေကိုဖတ်ပြီး … xx xx xx xx xx” အစချီပြီး ကျမကို မိတ်ဆက်လာပါတယ်။
သူကလဲ ဘိလပ်ကနေ မြန်မာပြည်ကို ခဏပြန်လာသူ တဦးပါပဲ။ ကျမစာတွေကို နှစ်သက်လို့ ဖုန်းနံပါတ် စုံစမ်းပြီး လှမ်းဆက်လာသူပါ။ ကျမမှာ တခါမှ အဲဒီလို ဖုန်းဆက်ပြီး မိတ်ဆက်တာ မခံဖူးတဲ့အတွက် တအံ့တသြဖြစ်ရင်း တဦးတည်းသော ပိတ်သတ်ကြီးက မိတ်ဆက်လာတာမို့ ပီတိတွေဖြာလို့ပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ စကားတွေပြောရင်း ခင်မင်သွားကြတဲ့နောက် စကားပြောချိုသာပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ အသံပိုင်ရှင် မမနဲ့ တွေ့ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ကျမမွေးနေ့ မတိုင်ခင် ညနေခင်းမှာ အဲဒီမမက ချာတိတ်တယောက်လွှတ်ပြီး ကျမအတွက် မွေးနေ့ လက်ဆောင် ပစ္စည်းပို့ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ ချာတိတ်နာမည်က ဒီးဒီးတဲ့ … ။ ညဘက် အဲဒီမမဆီဖုန်းဆက်ပြီး ကျေးဇူးတင်စကားပြောတော့ မမက ပြောပြတယ် … ။ အဲဒီချာတိတ်ကို မေဓာ့နာမည်ရယ် အိမ်လိပ်စာရယ် ပြောပြပြီး လွှတ်တော့ မေဓာဝီလား … သူသိတယ် … လို့ပြောသတဲ့။ ကဗျာတွေဘာတွေ ရေးတယ်၊ အင်တာနက်မှာ ဖတ်ဖူးတယ်လို့ ဆိုပဲလို့ မမက တအံ့တသြ ပြောပြတယ်။ မေဓာဝီတော့ နောက်ထပ် ပိတ်သတ်ကြီး တယောက်တိုးပြန်တာပေါ့ … ။ :)
လွန်ခဲ့တဲ့ တပတ် နံနက်တခင်း ကျမစာသင်နေတုန်း ကျမနာမည်မေးပြီး ဧည့်သည်အမျိုးသမီးကြီး တယောက် ရောက်လာလို့ ၀န်ထမ်းတွေက လာခေါ်တယ်။ ကျမတံခါးဖွင့်ပေးတော့ ရုံးခန်းထဲကို ၀င်လာပြီး “ကွန်ဂရက်ကျူလေးရှင်း မေဓာဝီ” … လို့ ဆိုင်းမဆင့် ဗုံမဆင့် ပြောပါလေရော … ။ ကျမကလဲ “ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အမရယ် … ဒါနဲ့ အမက ဘယ်သူလဲဟင်” လို့ မေးလိုက်ရတာပေါ့။ “ဟင်းဟင်း အံ့သြသွားတယ် မဟုတ်လား … အမက …. … … ရဲ့ အမပါ …” ဒီတော့မှ သြော် … လို့ အာမေဋိတ် ခပ်လေးလေး ရေရွတ်ပြီး နေရာထိုင်ခင်းပေးရင်း စကားပြောကြဖြစ်တယ်။ အဲဒီအမကြီးက ကျမအမသူငယ်ချင်းရဲ့ အမကြီးပါ၊ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ကျမဘလော့ဖတ်သူ တဦး ဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။
တခြားသူတွေတော့ မသိပါဘူး။ ကျမကတော့ … ဘလော့ရေးသူ တယောက်အနေနဲ့ ကိုယ့်ဘလော့ကို ဖတ်သူ တဦးတိုးတာကို သိတိုင်း ကိုယ့်မှာ တာဝန်တွေ ပိုရှိလာသလို ခံစားရတယ်။ ကိုယ်က ပရိုဖက်ရှင်နယ် စာရေးသူတယောက် မဟုတ်ပေမဲ့ သူတို့ထက် မလျော့တဲ့ အားထုတ်မှုတွေနဲ့ ကိုယ့်စာတွေကို ဖန်တီးရေးသားခဲ့ပါတယ်။ တခါတလေ ဖြစ်ကတတ်ဆန်း ရေးသလို ဖြစ်သွားခဲ့ရင် စာဖတ်သူတွေအပေါ် တာဝန်မကျေမှာ စိုးနေမိသေးတယ်။ ပြီးတော့ အရွဲ့တိုက်တတ် ကလိတတ် ရိတတ်တဲ့ ကျမရဲ့ ဉာဉ်ဆိုးကြောင့် မိတ်ဆွေတွေကနေ ရန်သူတွေ ဖြစ်သွားခဲ့ရတာတွေလဲ ရှိခဲ့ဖူးတယ်။ ရန်သူဖြစ်ပြီးမှ အလံဖြူပြပြီး မိတ်ဆွေ ပြန်ဖြစ်သွားသူလဲပဲ ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရေးခဲ့သမျှ ပို့စ်တိုင်းအတွက် ကျမ ကိုယ်တိုင် တာဝန်ယူပြီး၊ ရေးမိတဲ့အတွက် နောင်တရခဲ့တဲ့ ပို့စ်မျိုး တခုတလေမှတော့ မရှိခဲ့ပါဘူး။
အမှန်တွေ ရေးနေသရွေ့ ဘယ်သူ့ကိုမှလဲ ဂရုမစိုက်ဘူးလို့ ကြွေးကြော်ခဲ့ဖူးတဲ့ ကျမဟာ ခုတော့ ကိုယ်ရေးတဲ့ အမှန်တရားဟာ သူတဖက်သားအတွက် ထိခိုက်ရင် … ဆိုတာမျိုး တွေးနေမိပြီ။ အရင်က တနေ့တပုဒ် မှန်မှန်ရေးခဲ့ တင်ခဲ့ပေမဲ့ အခုတော့ တလတပုဒ် အနိုင်နိုင် တင်နေခဲ့ရပြီ။ အရင်လို အတွေးမသွက်သလို အရေးလဲ မသွက်တော့ဘူး … ။ စောင့်စည်းမှု ထိမ်းချုပ်မှုတွေနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကန့်သတ်ထားရင်း ထုံ့ပိုင်းထုံ့ပိုင်း စီးဆင်းနေတဲ့ မြစ်တစင်းဟာ နောက်ဆုံးအချိန် မရောက်မချင်း စီးဆင်းနေပါအုံးမယ် … ။ … ။
စာရေးသူ စာဖတ်သူအားလုံးကို လေးစားချစ်ခင်လျက် …
၃၀၊ သြဂုတ်၊ ၂၀၁၂
Posted by မေဓာဝီ at 6:27 PM 16 comments
၄၁ မြစ်တစင်း ...
﻿﻿လှစ်ခနဲ အပြောင်း ...
ကုန်သွားတဲ့ နေ့များစွာ ...
ကြုံရတဲ့ နေ့များစွာ ...
ဆုံကြတဲ့ နေ့များစွာ ...
စီးဆင်းရင်းနဲ့ ... ။
၂၁၊ သြဂုတ်၊ ၂၀၁၂
Posted by မေဓာဝီ at 7:10 PM 25 comments